Culimada Soomaaliyeed oo Cambaareysay Xasuuqa lagu hayo Muslimiinta Burma | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Culimada Soomaaliyeed oo Cambaareysay Xasuuqa lagu hayo Muslimiinta Burma
Culimada Soomaaliyeed oo Cambaareysay Xasuuqa lagu hayo Muslimiinta Burma
Muqdisho (SONNA) Kulankan oo Golaha Guud ee Culimada Soomaaliyeed ay ku yeesheen Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ay ku Cambaareeyeen falalka xasuuqa ah ee lagu hayo Muslimiinta Rohinga ee wadanka Burma, kuwaasi oo loo geysanayo Xadgudubyo meel ka dhac ku ah Xuquuqda Aadanaha.
Kulanka ayaa waxaa ka soo qeyb galay Macalimiinta Dugsiyada qur’aanka kariimka ee gobolka Banaadir, Culimaa’udiin iyo Aqoonyahano, waxaana diirada lagu saaray dhibaatooyinka lagu Xasuuqayo Muslimiinta Burma
Qaar ka mid ah Culimaa’udiinkii ka hadlay goobta ayaa si kulul u cambaareeyay shacabka iyo dowlada Burma , dhibaatooyinka xasuuqa ah ay ku hayaan Muslimiinta ku nool wadankaasi.
Madaxa Xiriirka Guud ee Golaha Cullimada Soomaaliyeed Shiikh Cumar Cali Rooble oo kahadlay goobta ayaa wax laga xumaado ku timaamay dhibaatooyinkaasi lagula kacayo Muslimiinta Rohinga ee wadanka Burma.
Ku simaha Golaha Guud ee Culimada Soomaaliyeed Shiikh Sayid Abaa Cali ayaa ugu baaqay Culimaa’udiinka Soomaaliyeed iyo dhamaan Muslimiinta in ay gacan ka geystaan sidii loogu gurman lahaa Muslimiinta la xasuuqayo.
Muddooyinkan ayaa waxaa isa soo tarayay Xasuuqa iyo Dilalka lagu hayo Muslimiinta Rohinga ee wadanka Burma.
Previous articleMadaxweynaha Dowlad goboleedka Jubbaland oo Booqday Mashruuca waraabka beeraha G/gedo
Next articleRuushka oo Soomaaliya ka saacidaya dagaalka dhanka argagixisada